Duulimaadyadii tooska ahaa ee Uganda & Soomaaliya oo si rami ah u bilowday - Awdinle Online
Duulimaadyadii tooska ahaa ee Uganda & Soomaaliya oo si rami ah u bilowday
Duulimaadkii ugu horreeyey oo isku xiraya Muqdisho iyo Kampala oo toos ah ayaa maanta ka biloway Garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cabdulle, ka dib muddo bilo ah oo safarka xagga cirka ah ay labada wadan u kala xirnaayeen safmarka cudurka Corona Virus.
Shirkadda diyaaradaha ee ku duusha calanka dalkaas ee Uganda Air waxay sameyn doontaa todobaadkii saddex maalmood oo ah duulimaadyadii caadiga ahaa ee Soomaaliya iyo Uganda oo istaagay bishii March ee sanadkii 2020-ka, xilligaas oo inta badan duulimaadyada caalamiga ah ee dunida loo joojiyey saamaynta cudurkan.
Michael Kalisa oo ah maamulaha Taya-dhawrka Uganda Air iyo Gudoomiyaha nidawga duulimaadyada gudaha Cali Axmed Faarax ayaa guul muhiim ah ku tilmaamay dib u soo laabashada duulimaadyadii toos ka ahaa ee isku xirayey Muqdisho iyo Kampala.
Uganda Air ayaa sameeyn doonta duulimaadyadeeda Muqdisho iyo Kampala maalmaha Axadda Talaadada iyo Khamiista.
Previous articleAskari loogu xukumay Dil kufsi uu gaystay
Next articleQarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho